WARBIXIN: Sidee ayuu Neymar uga baxsan karayaa baxarka la doonayo in xabsiga loogu taxaabo? – Gool FM
Byare November 23, 2016
(World) 23 Nof 2016. Dacwad oogayaal ku sugan Spain ayaa codsanaya in labo sano xabsiga loo taxaabo xiddiga Barcelona ee Neymar halka DIS ee ah shirkad qeyb wayn ka lahayd xuquuqda Neymar ay dalbeyso in ganaax adag oo shan sano ah la dul dhigo xiddiga reer Brazil kaddib markii ay ku soo eedeeyeen musuq ku aadan lacagihii lagula soo wareegay 2013-kii markii uu ku soo biirayay Barcelona.
Intaa oo kaliya ma hanee DIS waxay kaloo dalbeysaa in sideed sano xabsiga la dhigo madaxwaynaha iminka ee Barcelona iyo kii uu xilka ka badelay Josep Barthomeu iyo Sandro Rossell oo iyana musuq lagu soo eedeeyay.
Sidoo kale waxay doonayaan in iyana xabsiga la soo dhigo labada waalid ee Neymar.
Waxaa la aamisan yahay in Neymar ay Barcelona kula soo wareegtay 71.5 oo bound iyadoo waalidkiisa ay qaateen qeyb dhan 35-milyan oo bound, DIS oo iyadu qeyb ka lahayd xuquuqda Neymar ayaa aamisan inay xaq u lahaayeen in kabadan lacagihii ay heleen.
Haddaba Neymar ayaa ka baxsan kara baxarkan lala beegsanayo maadaama uusan jirin dambi horey loogu soo oogay, dacwad oogayaasha uu hogaaminayana xeer ilaaliye Jose Perals waxay dalbanayaan in laacibka 2-sano xabsiga la dhigo taa oo sharciga Spain uu qabo inuu banaanka ka joogi karo xabsiga.
Sheeko taa la mid ah waxay qabsatay Lionel Messi iyo Javier Mascherano ee kala tirsan Barcelona kuwaa oo 21-bilood iyo hal sano oo xabsi ah lagu kala xukumay kaddib isdaba marin canshuureed balse bannaanka ka jooga xabsiga.
Marka laga soo tago xabsiga ay doonayaan in la dhigo Neymar waxaa u dheer inay sidoo kale doonayaan adduun dhan 8.5-milyan oo bound oo mag dhow ah.
DIS ayaa dhab ahaan dooneysa in Neymar lagu xukumo shan sano iyadoona laga joojinayo ciyaaraha mudadaasi, taa ayaana halaagi karta waayihiisa ciyaareed. Mana awoodi doono inuu ka baxsado xukunka xabsiga ah haddii lagu helo dambiga.
Xukunku ma ahan mid rasmi ah oo waxay ku xiran tahay go’aanka uu garsooraha ku qaato maxkamadda, laakiin waxay u muuqataa inaysan wax dhaawac ah gaari doonin waayaha ciyaareed ee Neymar iyadoo ay dacwad oogayaashu doorteen labo sano iyo lacago ganaax oo xoog badan taa oo uu banaanka uga joogi karo xabsiga.
Abdisamed Mohamed Hassan .(Black Yare).
Obama "Michael Jordan wuu ka weyn yahay sawir yar oo Internet-ku ku maadsado"
Benzema oo u jawaabay dadka eedeynaya